Tag: ccpa | Martech Zone
Ny Plugins WordPress tsara indrindra ho an'ny tranonkalanao
Talata, Janoary 26, 2021 Alarobia 25, 2021 Douglas Karr
Ity dia lisitr'ireo plugins WordPress natolotro ho an'ny orinasa hanatsarana sy hanatsara ny tranokalany WordPress ho tranokala fanovana miditra. Ataoko vaovao hatrany izany satria mivoaka ny plugins vaovao.
Tuesday, January 26, 2021 Wednesday, August 25, 2021
Fanamby amin'ny marketing - sy vahaolana - ho an'ny 2021
Alarobia 13 Janoary 2021 Alarobia 13 Janoary 2021 Rich Smith
Tamin'ny taon-dasa dia fitsangatsanganana an-tsokosoko ho an'ny mpivarotra, ka nanery ireo orinasa saika isaky ny sehatra hivezivezy na hanolo paikady iray manontolo manoloana ny toe-javatra tsy takatry ny saina. Ho an'ny maro, ny fiovana niavaka indrindra dia ny fiatraikan'ny halaviran'ny fiaraha-monina sy ny fialofana amin'ny toerana, izay niteraka fitomboan'ny hetsika fiantsenana an-tserasera, eny fa na dia ireo indostria izay tsy nisy tononkalo nolazaina teo aloha. Io fiovana io dia nanjary tontolo dizitaly feno olona, ​​miaraka amina fikambanana marobe izay miady varotra amin'ny mpanjifa
Fomba fiasa 5 tena ilaina tadiavina amin'ny sehatra fananganana endrika an-tserasera
Alatsinainy, Aogositra 10, 2020 Alatsinainy, Aogositra 10, 2020 Rachel Skroback
Raha mitady fomba mora sy mahomby ary azo antoka ianao hanangonana ireo fampahalalana ilainao amin'ny mpanjifanao, ny mpilatsaka an-tsitrapo anao na ny vinavinanao, ny vintana dia mety hampitombo ny vokatrao amin'ny laoniny ny mpamorona endrika an-tserasera. Amin'ny fampiharana mpiorina endrika an-tserasera amin'ny orinasanao dia hahafahanao miala amin'ny fizotran'ny boky maharitra mandany fotoana ary hitahiry fotoana, vola ary loharano ampy. Na izany aza, misy fitaovana maromaro hisafidianana, ary tsy ny mpanangana endrika an-tserasera ihany no foronina mitovy.
Monday, August 10, 2020 Monday, August 10, 2020
Ny cookies dia tsy ilaina intsony izao: ny fomba fiovan'ny maha-izy azy sy ny maha-izy azy an'ity tontolo aorian'ny cookie ity
Asabotsy, Aprily 18, 2020 Asabotsy, Aprily 18, 2020 Diaz Nesamoney
Rehefa miditra ao amin'ny app Uber isika dia tonga dia misintona ny toerana itodihantsika farany indrindra. Rehefa mitsidika tranokala mitafy akanjo izahay dia mahita ireo soso-kevitra naroso nalaina tamin'ny fividianana teo aloha. Rehefa mizaha ny fitaovan'ny lasy an-tserasera izahay, dia atolotra haingana ny doka misy ifandraisany amin'izany varotra izany. Rehefa manokatra ny Google na ny Apple Maps izahay dia atolotra ho any amin'ny toerana itodiana matetika mitsidika ny ora sy ny toerana misy azy. Miankina amin'ny personalization ary miankina amin'ny zavatra iray daholo ny rehetra -
Saturday, April 18, 2020 Saturday, April 18, 2020
Ny piozila momba ny fitantanana data
Alakamisy Oktobra Oktobra 18, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Narame Sameer
Ny krizy momba ny mombamomba ny mpanjifa Ao amin'ny angano hindoa, Ravana, manam-pahaizana lehibe ary mpanjaka demonia, dia manana loha folo, izay maneho ny heriny sy ny fahalalany samihafa. Ireo lohan-doha dia tsy azo simbaina tamin'ny fahaizany mamoritra sy miverina mamerina. Tamin'ny adin'izy ireo, Rama, andriamanitra mpiady, dia tokony hidina ambanin'ny lohan'i Rahavana ary hikendry ny zana-tsipìka hamono azy ho soa. Amin'ny vanim-potoana maoderina dia mitovy amin'ny an'i Rahavana ny mpanjifa fa tsy amin'ny resaka azy